थाहा छ हातले खाना खाँदा के हुन्छ ? – Saurahaonline.com
थाहा छ हातले खाना खाँदा के हुन्छ ?
एजेन्सी, २५, बैशाख । हिन्दूधर्मको वेदहरुका अनुसार हात सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । यस्तै हातका प्रत्येक औँला पाँच तत्वको विस्तार हो । बुढी औँलाले अन्तरिक्षलाई बुझाउँछ । त्यस्तै चोर औँलाको साथ हावा ९वायु० जोडिनेछ ।
खाना खानु पहिले तथा खाइसकेपछि हात धुने क्रममा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । चम्चाले खाना खानुभन्दा हातले खाना खाँदा लाभदायक हुनेछ ।
हातले खाना खाँदा शरीरमा पञ्चतत्वहरुको सन्तुलन रहने छ ।
हातले खाना खाने हो भने टाइप २ डाइभिटिज ९मधुमेह० बाट पनि टाढा रहन बल पुग्ने छ ।
हातले खाना खाँदा हात, मुख, पेट, आँत तथा मस्तिष्कको बीच एक सम्बन्ध बनाउँने छ । यसबाट शरीरको भित्री संकेतमार्फत खाना सजिलै पचाउने छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार हातले खाना खाँदा राम्रोसँग पेट भरिनेछ । तृप्ति मिल्नेछ, यस्तै तौल घटाउनका लागि पनि हातले खाना खाए सहयोगी हुने छ ।